I-HP izonikeza ukusekelwa okusemthethweni ku-Ubuntu ku-Proliant yayo | Kusuka kuLinux
I-HP izonikeza ukusekelwa okusemthethweni ku-Ubuntu ku-Proliant yayo
Eyodwa ngesikhathi esihle sabalandeli be Ubuntu Server, kahle kusukela I-ExtremeTech.com lezi zindaba ziza kithi mayelana Ubuntu Server y HP.
HP ithathe isinqumo sokweseka ngokusemthethweni uhlobo lweseva lwe Ubuntu kuzo Ukukhiqiza, i-hardware yamanje neyesikhathi esizayo. Ngokuqondile inguqulo elandelayo engu-12.04 ezokhishwa ezinsukwini ezimbalwa, kepha ... kusho ukuthini konke lokhu?
Okulula ... amakhasimende asebenzisa i-Proliant kanye nale distro, bazoba nesiqinisekiso sokwesekwa kwehardware kusuka ku-HP. Kuze kube manje (futhi njengoba ngifunda), lokhu akusho ukuthi noma ngubani angashayela i-HP ngethemba lokuthi uzoxazulula inkinga angaba nayo neseva yakhe, kepha uma unale distro efakwe kwi-HP Proliant, lapho ubabiza becela ukwesekwa NO uzolahlekelwa ukwesekwa ngokuzenzakalela njengoba kubonakala manje. Ngiyazi ukuthi akukuningi impela, noma cha njengoba ufuna ... kepha-ke, kancane kancane
ICanonical inokulandela okukhulu, kanye nenombolo elinganayo (noma ngaphezulu) yama-naysayers. Nokho kuze kube manje njengoba kusho UChris Kenyon (Iphini Likamongameli Oyi-Canonical Wezinsizakalo ze-OEM): «Konke ebesisebenza kukho eminyakeni yamuva nje, kufakwe amakhemikhali (kwenziwa) ngomzuzu ofanayo«
Futhi yebo, akunandaba ukuthi ngabe i-CIA ibe nempumelelo noma amaphutha amangaki, impumelelo yayo ibisivele imbalwa:
I-Android + Ubuntu
Unity (Noma kunamaphutha onawo, yebo, kuyimpumelelo, ngoba iyiShell abayenzile, bangaki abenze lokhu ngaphandle kwabo? … IGnome neMint kuphela)
Noma kunjalo, angisiye umlandeli we I-Canonical (yize kwesinye isikhathi kungabonakala njengokufana nayo), kepha okuhle nokubi kufanele kubonwe noma kushiwo, nokuthi umthengisi ongu-No.1 wamakhompyutha emhlabeni (HP) ukwesekwa Ubuntu Server kuzo Ukukhiqiza, izindaba ezinhle impela.
Sizobona ukuthi yini ephuma kukho konke lokhu 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-HP izonikeza ukusekelwa okusemthethweni ku-Ubuntu ku-Proliant yayo
Uyibona kanjani iminyango yezikweletu, nsuku zonke isoftware yamahhala ithola indawo engaphezulu =)
Kage, qaphela amazwi akho, kukhona oyibonayo akuxoshe hehe
Kuyathakazelisa, hhayi kangako, kepha izindaba ezinhle.
Engikuthandayo nge-HP ngamaphrinta abo kuwo womabili ama-debian, ubuntu ne-mint, akudingeki ukuthi wenze noma yini ukubenza basebenze, vele ubaxhume i-XD.
kuhle ekuhlolweni kwe-debian uma ukwazi esitebeleni yebo kuzodingeka ulungiselele ngesandla uma iphrinta yintsha kakhulu.
Kungani ngikhuluma ngamaPrinta?
ngakho-ke i-HP ehamba phambili kumaphrinta kumakhompyutha, hmm hhayi kakhulu.
I-hp yami iyithanda kuphela kubaphrinta, amathanga abukeka emahle kepha aphuka sengathi ayipulasitiki ekugcineni i-xD….
Ngine-laptop ye-hp futhi akukho engingakunikeza khona, ngiyilahle kaningi futhi ikakhulukazi ama-aluminium dents
Hhayi, angiyithandi njengoba bekulindelekile, lesi sinyathelo asiqondakali.
Bekungeke yini kube ngcono ukukhetha i-distro esikhundleni sokuyiphoqa?
bakhetha ubuntu kuwo wonke umsebenzi owenziwa yi-canonical ukuyenza i-OS eqinisekisiwe enemibhalo nokusekelwa. kepha njengenjwayelo kuvela abantu abanjengawe abangawuboni wonke umsebenzi.
Ngiyamemezela kuwe ubunto
Uthini umsebenzi? Leyo uMandrake ayenzile ukuletha iLinux kumsebenzisi ojwayelekile, ngokwesibonelo?
Ngokwazi kwami ​​uCanoni $ oft akenzanga lutho ngaphandle kokumaketha
Ngivumelana nePandev92 ukuthi ama-hp PC aphuka kalula. Ngisho ngoba ngine-mini hp engiyibona njengoba ibilokhu iwohloka. Okokuqala ishaja, bese ibhethri, bese ikhibhodi. Sengivele ngicabanga ukuyifaka esikhundleni se-dell noma i-lenovo.
Ngokusho kwesibindi ngibuye ngibe kuyo yonke indawo futhi yize ngingahlanganyeli nezinqumo zeCanonical ngo-100%, ngikholelwa ukuthi lapha sikhuluma ngamaseva nokusekelwa kwabo kwezobuchwepheshe, hhayi ukusatshalaliswa kwedeskithophu akudelela kakhulu.
Ikhompyutha yami ephathekayo yi-HP futhi kuze kube manje anginasikhalazo ngayo, futhi bengiyisebenzisa (nokuningi) cishe iminyaka engu-3 noma engu-4. O, futhi ngine-PC ye-100% ye-HP ... futhi ukubheja okuxakile, bekufanele ngiyithengise ngezizathu ezinkulu ... kepha bekuyinto enhle, kungekho zikhalazo.
Kuze kube manje ngincamela i-HP kunanoma yimuphi omunye umkhiqizi, njengoba ulwazi lwami ngemishini yabo lube luhle 😀
Izindaba zakamuva zeLinux Mint: inguqulo 13 izobizwa nge- "Maya"
i-uniSEX: Itimu ye-Gtk igcwele amajika kanye nemiphetho eyindilinga